Mufdiga Weyn Ee Sheekh Dirir Oo Ka Hadlay Waxyaabaha Ummada Ka Dhexeeya - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
“Macdanta ummada ka dhexeysa iyo baadka (dooga) ka baxa baadiyaha iyo dhirta, waa hanti ummadeed,
Hargeys(ANN)- Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa bulshada uga digay halista ay leedahay in xoolaha ummada ka dhexeeya lagu xad-gudbo, taasoo maalinta qiyaame isagoo dusha ku sida keeni doonaa, ilaahayna naf walba waxii ay dulmiday ka xisaabin doonaa.
Sheekh Maxamed ayaa khudbadii Jimcaha maanta ku soo qaatay cinwaan uga dhigay inay xaaraan tahay ku xad-gudubka xoolaha ummada ka dhexeeya, oo aanay xukuumad-na ku xad-gudbi Karin, dadweynahuna ku xad-gudbi Karin ayuu ku bilaabay,
“Waa arrin casrigan la joogo u baahan wacyigelin weyn hadii la eego madaxda iyo raciyadaba. Waxa had iyo jeer ummada ka dhexeeya ee loo yaqaan hantida dadweynaha, ama kheyraadka ilaahay ummada ku galaday ee ka dhexeeya casrigan aynu joogno meel xun ayaa lala marayaa. Markaa way mudan tahay qaanuunka islaamku waxuu ka qabo inaynu wax ka nidhaahno.
Mar uu ka hadlayey shareecadda islaamku waxay ka qabto wax ummada ka dhexeeya in cid gaar ah isticmaasho ayuu yidhi, Sheekh Maxamed, sidan”:-
“Ilaahay suuratul Al-ancaam waxuu ku tilmaamay qofka hantida ummada wax ka qaata, oo QAAL ka yidhaahdo, waa nooc tuugada ka mid ah, waxaanu yidhi, ‘Nebi csw uma haboona inuu wax xaddo, qofka wax ka qaatana, maalinta qiyaame isagoo dusha ku sida ayuu keeni doonaa, markaasaa ilaahay naf walba waxii ay dulmiday ka xisaabin doonaa.
Rasuulku csw meel adag ayuu iska taagi jiray, isagoo xukunkeeda ku caddaynaya, dagaal baa la galay, nin baa si degdeg ah u shahiiday, oo xabbad seeraare ah cuskatay, ninkaa waan hambalyeynaynaa sahiidnimadiisa daraadeed, ayey asxaabtii tidhi, weli shaqaalahii Rasuulka csw ka mid ahaa, markaa Nebigu CSW waxuu yidhi MAYA, ‘haka yaabina, kaasi NAAR ayuu ku jiraa, maalintii Kheybar qaniimadii lawada lahaa oon la qeybin ayuu macawis yar ka qaatay, tii oo naar ah ayaa imika ku holcaysa, oo Ilaahay tusayaa’, waa xadiis saxeex ah.
Xadiis kaloo Abu-huraysa weriyey oo saxeex ah Nebigu CSW ummaduu wacdiyey, kuwaa wakhtigaa joogay, innaga iyo kuwa soo socdaba, in waxa ummadu wada leedahay xaaraan lagu cunno, si adag ayuu ula hadlay waxuu yidhi, ‘waar dadyahow aakhiro yaanan idinla kulmin, iyadoo waxii aad xadeen aad dusha ku sidataan, wuu sii faahfaahiyey Nebigu CSW oo yidhi ‘mid baa la imanaya neef adhi ah oo dushiisa ka ciyaya, fartuu ii taagayaa ii gurmo? Annigu waxaan leeyahay, Ilaahay waxba kaagama qaban karo, horre ayaan kaaga digay, cunitaanka xoolaha ummada inay xaaraan tahay ifkii ayaan kuugu sheegay. Mid kalaa imanaya dusha ku sita neef geel ah, mid baa ku sita faras, mid baa ku sita wax aamusan (mood-dahab iyo lacag ayuu xambaarsan yahay), mid kaa sita bagaashkii iyo dharkii, oo dabayshu ka sanqadhinayso, ummaduna arkayso, mid walba intii kii hore ayuu leeyahay, Rasuul allow, Ilaahay iiga ergee, mayee waan ku soo gaadhsiiyey, waxaad ka hesho ayaad leedahay, markaa ayaan odhanayaa “Waxba Ilaahay kaagama qaban karo’. Markuu khudbadii Rasuulku CSW jeediyey ayuu saxaabadii qof kastoo wax qaatay iska soo tuuray.
Sheekh Maxamed ayaa ka hadlay in xukunka shareecada islaamku ka sii khatarsan yahay waxa gaarka loo leeyahay, waxa la wada leeyahay qaadashadeeda, ayaa mar uu ka hadlayey noocyada ay tuugadu noqon karto, waxuu yidhi,
“Baananka iyo waxii ummada ka dhexeeyey markaad wax ka amaahato inaad deyn bixi weydo, oo is-tidhaahdo manta ayaad fursad heshee, ka baxso, oo sidaa ku dhaqaaji. Way dhacdaa dadkeena qaar bangiyada lacag ka amaahday oo dawladii hore burburtay, iyadoo lacago lagu leeyahay, oo daaro, beero iyo hanti ka samaystay, dad kaloo hatidii u taalay waayey ayey waxoodii haystaan, markaa qofku intiisa waxaan ahayn waa inuu ummadii uu ka qaatay u soo celiyo. Sida wax loo xaddo waxa ka mid ah si yar oon dadku iskaba filayn saacadaha biyaha, kuwa laydhka, oo la joojiyo ama wax laga bedelo, ama lacagta lala baxsado, waa waxii dadka ka dhexeeyey ama shirkad ha lahaato ama dawlad, waa wax dadku iska xalaashadeen. Waxa ka mid ah agabka loo isticmaalo shaqada dawlada ama shirkadaha, sida komputerada, mobilada, gaadiidka in dannaha gaarka loo isticmaalo, waxaad ku berri noqon kartaa inaad shidaalka iska xisaabiso, lacagta meelaha kale ku baxday. Waxa ka mid ah siyaalaha loo xaddo xoolaha ummada, markaad meel dhexe joogto ood dadka wax ka iibinayso, ama hay’ad, xukuumad ama shirkad, inaad macmiilka laaluush ka qaado, la’aantii aanad mashruuca siinin, ama annigu cid wax I siisa ayaan ka iibin doonaa, taasina waa nooc laaluushka ka mid ah. Waxa ka mid ah xatooyada in la burburiyo hanti ummadu wada leedahay, dadku marka ay xukuumadaha la coloobaan waxa bilaabma inay waxii xukuumad ama hanti caam ah ka soo jeeda la burburiyo ama la xaddo. Waxa ka mid ah goobaha la wada leeyahay sida masaajidka, kutubtiisa, gogoshiisa, cawdiisa inaanad qaadan Karin, oon lagu xad-gudbin.
Sheekh Maxamed oo ka hadlayey noocyada hantida caamku noqon karto ayaa yidhi waxa ka mid ah, masaajidada, dugsiyada caamka, jaamacadaha, madaarista quraanka, meelaha dadka ka dhexeeya ee goob waxbarasho la yidhaahdo, waa meelaha la wada leeyahay, wax aka mid ah cusbitaalada iyo xanaanooyinka lagu daaweynayo kuwooda buka dadka, meelaha agoonta lagu barbaariyo iyo dadka waaweyn iyo meelaha dannaha guud dhamaantood lagu qabto, sida waddooyinka, oo ummada ka dhexeeya inuu qof gaar ah iskaga shaqeysto ama xidho waa gef, biriishyada ka mid ah, dekedaha, garoomada diyaardaha, goobaha caruurtu ku ciyaarto, meelaha oo dhan danta guud ayey ka mid yihiin, in cid gaar ah iska sheegato ama taajir ka sii iibsado waa dulmi, xoolo la wada lahaa oo la lunsaday weeye. Waxa ka mid ah macdanta ummada ka dhexeysa iyo baadka (dooga) ka baxa baadiyaha iyo dhirta, sidaa daraadeed dadka qaarkii hadday macdanta iska xidhaan, ama shidaalka iska xidhaan, ama cawskii iska ootaan, ama dhirtii intay xidhaan gubaan, qofkaasi waa daalim lacagta ummada qaatay oo kale. wax aka mid ah webiyada iyo biyaha qulqulaya, Waxa oo dhan waxa wada leh innaga iyo ubadkeena soo socda. La soco qeybta dambe Insha alaah.
Sheekh Dirir Oo Tilmaamay Fasaadka Iyo Sida Ay Diinta Islaamku Uga Hadashay